ယာဉ်မောင်း Jobs in Myanmar
ယာဉ်မောင်း အလုပ် 75 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ထိပ်တန်း ယာဉ်မောင်း အလုပ်အကိုင်များ။ Alote.com.mm တွင် နောက်ဆုံး လစ်လပ်နေရာများအတွက် အလုပ်ရှင်များထံ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားပါ။
ယာဥ္ေမာင္း (Can Work At Hlaing Thar Yar Zone-2)
ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း က်ြမ္းက်င္စြာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရမည္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ျပီး အမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္ အရက္ေသစာ မမွီ၀ဲသူျဖစ္ရမည္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျပီး သြက္လက္တက္ၾကႊစြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္ Collect payments and issue receipts Other duties, responsibilities, and qualifications may be required assigned as necessary
အကျိုးအမြတ်: Rewards for over performance Uniform
ရန်ကုန်မြို့တွင်းကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းနှင်နိုင်ရမည်။ ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်သူ/ အရက်မသောက်တတ်သူဖြစ်ရမည်။ အလုပ်အား အချိန်ပေးနိုင်သူ ဖြစ်ရပါမည်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စိတ်ဓါတ်ရှိရမည်။ အကျင့်စာရိတ္ထ ကောင်းမွန်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: စားစရိတ် ခရီးစရိတ် အချိန်ပိုကြေး ဘောနပ်စ်
- ရန်ကုန်မြို့တွင်း၊ နယ်ဝေးကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနိုင်ရမည်။ - ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးအဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။
ယာဉ်မောင်း (ပူတာအို ဆိုင်ခွဲ)
ပူတာအို | ကချင်ပြည်နယ် ကချင်ပြည်နယ်
- အခြေခံပညာ အလယ်တန်း (သို့) အထက်တန်းတက်ရောက်ထားပြီး၊ အသက်(၃၀-၄၅)နှစ် ဝန်းကျင်ရှိသူ။ - သတ်မှတ်ယာဉ်အား ကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းနှင်နိုင်သူ။ - ယာဉ်မောင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူ။ - (၃)တန်နှင့်အထက် ယာဉ်မောင်းနှင်နိုင်သည့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရရှိကိုင်ဆောင်ထားသူ။ - အလုပ်တာဝန်အား လေးစားလိုက်နာပြီး ရိုးသားကြိုးစားသူ။
ရန်ကုန်မြို့တွင်ကားကျွမ်းကျွင်စွာမောင်းနိုင်ရမည်။ နယ်ထွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ တာဝန်ကျသည့်ကားအား ယာဉ်နောက်လိုက်နှင့်အတူ ကားသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများပြုလုပ်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: meal allowance
တင်သောနေ့: 15 Nov 2021
Recruiter active 54 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
- To control motor car routes - To assign drivers for ferry case & fuel case - To check, inspect worktickets and issue fuel slip - To arrange motor car maintenance and repair - Maintenance record and prepare report
အကျိုးအမြတ်: - Ferry provide - Meal Allowance
Driver required for Directors, understand Yangon city and all nearby townships, able to speak english. Good experience previoulsy as Driver for international company preferred.
အကျိုးအမြတ်: Friendly working environment
- ယာဥ်မောင်း လိုင်စင်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - ကားမောင်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၅) နှစ် အထက်ရှိရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Salary + Other Allowance
ကားကိုကောင်းမွန်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ကိုင်တွယ်သူဖြစ်ရမည် စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းကို အပြည့်အဝလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ကားကြီးကားလေး မောင်းနှင်နိုင်ရမည်။
- လိုင်စင်အနက် ရရှိထားသူဖြစ်ရပါမည်။ - အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ရမည်။ - တာဝန်ချိန်တွင်ကွမ်း၊ ဆေးလိပ်၊ အရက် ၊ လုံးဝမသောက်သူဖြစ်ရပါမည်။ - အစမ်းခန့်ကာလအတွင်း အတွေ့အကြုံပေါ်ညှိနှိုင်းပေးမည်။ - အလုပ်ပိတ်ရက် - တစ်ပတ်တစ်ရက် ပိတ်မည်။
JOB SUMMARY The Company Driver shall be responsible in driving the sales company vehicle. He shall ensure safety of passengers and vehicle that he is driving. The Driver shall also ensure the vehicle is clean and maintained at all times. II. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES Drive Sales-assigned company vehicles to pick or drop Salesman to and from his outlet stores. Deliver important documents to required destinations as needed Ensure that all deliveries have been signed and delivered to the correct recipient Keep vehicle clean daily and maintained at all times Perform preventative and regular maintenance on vehicle Performs other duties as assigned from time to time III. BASIC RELATIONSHIP Immediate Superior: Salesman Next Level Superior: Area Sales Manager Internal contacts: Sales Personnel
ရုံးလုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချက်အရ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ကားမောင်းရပါမည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ကားလမ်းကြောင်းများကို ကောင်းမွန်စွာ နားလည်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Overtime ကြေးခံစားခွင့်ရမည်။
Recruiter active 50 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
မန္တလေးမြို့တွင်း ကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းနှင်နိုင်ရမည်။ လိုအပ်ပါက ခရီးသွားလာနိုင်ရမည်။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်းပြီး ကုမ္ပဏီနှင့် ရေရှည် လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ ကားအမျိုးအစားမျိုးစုံ မောင်းနှင်နိုင်သူ ဦးစားပေးမည်။
- ဖြန့်ချိရေးကုမ္ပဏီတွင်လုပ်ကိုင်ရမည်။ - ဝန်ထမ်းဖယ်ရီ(သို့) ရုံးကားမောင်းရမည်။
အကျိုးအမြတ်: -ဖယ္ရီ -ယူနီေဖာင္း
Zu Zu Myanmar
မော်တော်ယာဉ်ဌာနအား စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ရမည်။ ယာဉ်မောင်းတတ်ကျွမ်းရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေအကြုံအနည်းဆုံး (3) နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။ အိမ်ထောင်မရှိသူဉီးစားပေးမည်။
အကျိုးအမြတ်: Lunch provided
- သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်။ - ကားမောင်းလိုင်စင် အညို (သို့မဟုတ်) အနီ ရှိသူဦးစားပေးမည်။
အသောက်အစား ကင်းရှင်းရမည်။ ရန်ကုန်မြို့ အတွင်းကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနှင်နိုင်ရမည်။ ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: စွမ်းဆောင်ရည် အတွက်ဆုလာဘ်များရမည်။
ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး တက်ကြွပြီး အလုပ်ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ ယာဉ်မောင်းကျွမ်းကျင်ပြီး မြို့/နယ်အတွင်း သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ အရက်ရှောင်ရမည်။ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ဂရုတစိုက်လိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: * စွမ်းဆောင်မှု ကျော်လွန်ခြင်းအတွက် ဆုကြေးငွေ
Silver Pearl Angel Co.,Ltd
- ကွမ်း၊ အရက် နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းရှင်းသူ - ရန်ကုန်မြိုအနှံကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနှင်နိုင်သူ - အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ၊ ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်၍ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ
အကျိုးအမြတ်: - Basic လစာအပြင်ရက်မှန်အပိုဆုငွေ နှင့်အရောင်းခံစားခွင့်များရှိပါသည်။
Pro 1 Home Center
လိုင်စင်အနက်သက်တမ်း အနည်းဆုံး (၂)နှစ်ရှိရမည်။ ယာဉ်မောင်းသက်တမ်း အနည်းဆုံး (၃) နှစ်ရှိရမည်။ ယာဉ်မောင်းစဉ်ကာလတစ်လျှောက်လုံး မှတ်တမ်းကောင်းရှိသူကိုဦးစားပေးမည်။ အချိန်ပိုဆင်းနိုင်ရမည် လိုအပ်ချက်ရှိလျှင် ရှိသလို တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: အ‌ြေခခံလစာ ရက်မှန်ကြေး Other Allowance Driver Fee Uniform Allowance
Group Driver Position
Nice Style Travels and Tours Co Ltd
ရန်ကုန်မြို့ အတွင်းကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနှင်နိုင်ရမည်။ ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။ သင်္ကန်းကျွန်း/သုဝဏ္ဏ/တောင်ဉက္ကလာမြို့နယ်များတွင် နေထိုင်သူဦးစားပေးမည်
၀န်ချီစက် ယာဉ်မောင်း | Forklift Driver
New Strength Company
သက်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည် Company ချမှတ်ထားသော စဥ်းကမ်းလိုက်နာနိုင်ရမည်
- ဝန်ထမ်းများအတွက် အလုပ်သွားပြန်၊ အလုပ်ကိစ္စ၊ လုပ်ငန်း site များသို့သွားခြင်းတို့အတွက် safe ဖြစ်စွာမောင်းပို့‌နိုင်ရမည်။ - (နေ့စဉ်/အပတ်စဉ်/လစဉ်)ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ - (နေ့စဉ် / အပတ်စဉ် / လစဉ်)အစီရင်ခံစာ တင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: - Fair Overtime Payment - Yearly Bonus - Phone Package - SSB - ယူနီဖောင်းနှင့် အခြားကုမ္ပဏီလက်ဆောင်များရမည်။"
Shwe Kyun International Co.,Ltd
Auto နှင့် Manual ကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည် ရန်ကုန်မြို့ လမ်းများ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မောင်းတတ်သူ ဖြစ်ရမည် နယ်ခရီးများ ကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းတတ်သူ ဖြစ်ရမည် အသောက်အစား ကင်းရှင်းသူ ဖြစ်ရမည် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်